Ikhabhinethi eNtofo ka-Aggieland
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLois
Molo! Wamkelekile kwiKhabhinethi eNgcono yaseAggieland. Lo moya ofudumeleyo yindawo entle yokukhaba umva kwaye uphumle. Kuphela ishumi elinesihlanu ukuya kwimizuzu engamashumi amabini ukusuka eKyle Field, kunye neemayile ezisixhenxe ukusuka kwiMessina Hof Winery, uneyona nto ingcono kuzo zombini zehlabathi. Indawo yokungena yabucala enekhapoti iya kukunika inkululeko yokuza nokuhamba. Kukho nedama kwipropati. Uya kuziva ngathi ubuyile ekhaya. Ukutsala itreyila? Kukho indawo eninzi yokupaka kunye nesango lokungena elinekhowudi, akukho nkxalabo malunga nokhuseleko.
Kukho ibhedi yokumkanikazi kunye nokukhetha enye ngaphezulu kwi-sofa. Zive ukhululekile ukusebenzisa umqamelo owongezelelweyo kunye neebhedi kumntu wesithathu. Wamkelekile ukuzisa umntwana wakho engqondweni, ligumbi lokulala elinye. Ndisebenzisa isicoci se-ultraviolet kumandlalo kunye nebhedi emva kokuba undwendwe ngalunye luhambile, ndigungxule imigangatho nge-mop yomphunga, kwaye kukho isicoci seselfowuni ukuba ungathanda ukuyisebenzisa. I-Alexa Echo ifumaneka kwigumbi lokuhlala kufutshane nomabonwakude, kunye netshaja engenazingcingo yefowuni nje ukuba uyayifuna.
4.91 · Izimvo eziyi-86
Umoya wasemaphandleni. Indawo ezolileyo nentle.e
Zive ukhululekile ukuthumela umyalezo ngayo nayiphi na kunye/yonke imibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo, okanye umise ukuze undwendwele. Ukuba ufuna ubumfihlo bakho, akukho ngxaki. Injongo kukuba ube nokuhlala ukhululekile.
Nceda, qaphela ukuba sisezweni. Akukho mithetho yentambo. Ndinezinja ezimbini ezinobubele kakhulu. Baza kuphuma kwaye malunga ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela kum. Ndiyakwazi ukuzigcina kuphela ngelixa "usekhaya," ukuhlala kwakho konke, okanye akunjalo.
Zive ukhululekile ukuthumela umyalezo ngayo nayiphi na kunye/yonke imibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo, okanye umise ukuze undwendwele. Ukuba ufuna ubumfihlo bakho, akukho ngxak…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bryan